1of7In this April, 24, 2020, photo, people wait to fetch water from a row of communal taps that the group Doctors Without Borders provided in a suburb of Harare, Zimbabwe. For people around the world who are affected by war and poverty, the simple act of washing hands is a luxury. In Zimbabwe, clean water is often saved for daily tasks like doing dishes and flushing toilets.Tsvangirayi Mukwazhi/AP
2of7In this April, 24, 2020, photo, water flows from a communal tap that the group Doctors Without Borders provided in a suburb of Harare, Zimbabwe. For people around the world who are affected by war and poverty, the simple act of washing hands is a luxury. In Zimbabwe, clean water is often saved for daily tasks like doing dishes and flushing toilets.Tsvangirayi Mukwazhi/AP
3of7FILE - In this April 22, 2020, file photo, a woman wearing a face mask as a precaution from the coronavirus collects water on the side of the road to take home in Caracas, Venezuela. For people around the world who are affected by war and poverty, the simple act of washing hands is a luxury.Ariana Cubillos/AP
4of7In this March, 31, 2020, photo, women and children wait for their turn to fetch water in a poor suburb of Harare, Zimbabwe. For people around the world who are affected by war and poverty, the simple act of washing hands is a luxury, even during the coronavirus pandemic. In Zimbabwe, clean water is often saved for daily tasks like doing dishes and flushing toilets.Tsvangirayi Mukwazhi/AP
5of7FILE - In this May 9, 2020, file photo, a woman carries containers of water in the Petare neighborhood, one of the poorest slums in Caracas, Venezuela, during a government-imposed quarantine to help stop the spread of the coronavirus. For people around the world who are affected by war and poverty, the simple act of washing hands is a luxury.Matias Delacroix/AP
6of7In this March, 31, 2020, photo, buckets are lined up as women fetch water in a suburb of Harare, Zimbabwe. For people around the world who are affected by war and poverty, the simple act of washing hands is a luxury, even during the coronavirus pandemic. In Zimbabwe, clean water is often saved for daily tasks like doing dishes and flushing toilets.Tsvangirayi Mukwazhi/AP
7of7In this April, 24, 2020, photo, people wait to fetch water from a row of communal taps that the group Doctors Without Borders provided in a suburb of Harare, Zimbabwe. For people around the world who are affected by war and poverty, the simple act of washing hands is a luxury, even during the coronavirus pandemic. In Zimbabwe, clean water is often saved for daily tasks like doing dishes and flushing toilets.Tsvangirayi Mukwazhi/AP